देवीदेवताका आकृति सहितको अनौठो गुफा भेटियो म्याग्दीको मंगलामा
माघ २९, २०७४
म्याग्दी, २९ माघ -मंगला गाउँपालिका–१ खानीगाउँमा अचम्मको गुफा फेला परेको छ ।
बीस मिटर लामो सो गुफामा जनावर, पक्षी, हातहतियार, हिमशृंखला, पहाड, तालतलैया, देवीदेवताका मूर्ति, घरलगायत आकृति रहेका स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
पहाडको फेदीमा अवस्थित गुफाको अगाडिको भाग एक मिटर अग्लो भए पनि भित्री भाग तीनदेखि चार मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ । गुफाको बारेमा जिल्लाभित्र र अन्य ठाउँमा जानकारी नभएकाले ओझेलमा परेको कुहुँका बासिन्दा एवं शिक्षक डकवबादुर रोकाले बताउनुभयो । गुफाको बारेमा प्रचारप्रचार हुन नसकेको रोकाको भनाइ छ ।
स्थानीयवासी र छिमेकी वडाका विद्यालयबाट शिक्षक र विद्यार्थी गुफाको अवलोकन गर्न आउने गरेका छन् । “गुफाका बारेमा धरैलाई जानकारी छैन” रोकाले भन्नुभयो– “व्यवस्थित पदमार्ग निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्ने हो भने गुफा जिल्लाकै पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्छ ।”
एउटै गुफाभित्र रहेका धेरै आकर्षक कलाकृतिले कठिन पैदलयात्रा गरेर त्यहाँ पुग्दाको नरमाइलो क्षण बिर्सिएको गुफाको अवलोकन गरेर फर्कनुभएका रञ्जीत रोकाले बताउनुभयो ।
सदरमुकाम बेनीबजारदेखि करिब तीन घण्टाको पैदलयात्रा पछि पुगिने सो गुफाको संरक्षण गर्नतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटकीय सम्भावना भएर पनि भौतिक पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावमा सो गुफा ओझेलमा परेको स्थानीयवासी बताउँछन् । रासस
माघ २९, २०७४ मा प्रकाशित
वास्तुशास्त्र भन्छ, आइतवारदेखि शनिवारसम्म कुन बार के काम गर्दा हुन्छ फाइदा ?
असल जीवनसाथी छान्न जरुरी
विश्वको अनौठो शहर जहाँ बस्दा पैसा पाइन्छ !
विज्ञानका अनुसार यी महिलाको फिगर हो सबभन्दा गजब, यस्ती देखिन्छिन्
यस्ता काम गर्नुहोस्, कहिल्यै असफल भइदैन
यी हुन् किम जोङ–उनकी पूर्वप्रेमिका, यसकारण मन पराएका थिए
मन्त्रीपरिषदद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रको तलब बृद्धिको घोषणा सुडानको मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा कर्मचारीहरुको तलब बिहीबार बृद्धि गरिदिएको छ । सुडान वकर्स ट्रेड युनियन फेडेरेसनले झण्डै पाँच सयदेखि २५ सयसम्म स...
विरालो मार्ने चालकलाई मलेसियाको अदालतद्वारा दुई बर्ष जेल सजाय
वडा सदस्य उत्तम चौधरीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
पर्वत बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको ७ जनाको सनाखत
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ को सेवालाई सरकारले राेक नलगाउने
तीन पेट्रोल पम्पलाई कारवाही